> Resource > Video > Sida loo Beddelaan AVI in MPEG-2
Dad badan ayaa doonaya in loogu badalo AVI in MPEG-2 DVDs gubanaya. Sababtu waxa weeye inta badan in MPEG 2 waa mid ka mid ah qaabab DVD ugu fiican. Haddii aad sidoo kale u baahan tahay si loogu badalo AVI in MPEG 2 dambe aad qalab DVD gubashadii u gaar ah, AVI weyn oo MPEG 2 Converter gubanaya DVDs si adag lagula talinayaa in aad.
Taasi Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ), taas oo si toos ah ula "MPEG-2" qaabka wax soo saarka filaayo in siisaa dadka isticmaala. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doorasho ka mid ah ka dibna app u samayn karaa wax u nasasho kuu. Xawaaraha Wareejinta waa ultrafast iyo tayada wax soo saarka waa ku yaab. Sidoo kale, waxa ay taageertaa diinta Dufcaddii. Tan ugu muhiimsan, app si toos tan kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan files AVI in DVD aad si fudud oo dhaqso. Ee ah kuwa loogu badalo AVI in MPEG-2 DVD buring ka dib, app tani waxay noqon kartaa gabi ahaanba qalab ku haboon si ay u caawiyaan iyaga ku dhameysan mashruuca, aad bay u badbaadiyo waqtigooda.
Next, waxaana idin tusin doonaa sida loo sameeyo AVI in MPEG-2 diinta ee Windows. Haddii aad rabto in aad isticmaasho AVI si MPEG 2 Converter ay gubaan DVD ah, fadlan tag iyada oo talaabooyinka aasaasiga ah dhamaadka tutorial this.
1 dar AVI videos in AVI in ay MPEG-2 Converter
Si toos ah jiidi jeedi videos AVI deegaanka ka kombiyuutarka in software this. Haddii kale, u tag geeska kore ee bidix ee interface hadda, ka dibna ku dhufatey button. Ka dib markii in, waxaad heli doonaa fursad ay xitaa your computer dooro files AVI aad rabto in aad keeno. The videos ku daray in la soo bandhigi karin thumbnail.
2 Dooro MPEG-2 sidii qaab wax soo saarka
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan MPEG-2 sidii qaab wax soo saarka. First of dhan, waxaad u baahan tahay in la furo qaab saarka daaqadan app ee adigoo gujinaya liiska dropdown qaab guddiga Qaabka Output dhinaca midig ee interface ugu weyn. Markaas suuqa kala pop-up ah, u tag "qaab"> "Video"> "MPEG-2".
Fiiro gaar ah: Marka hoose ee interface ugu weyn, waxaa jira jid file wax soo saarka ah. The files gediyay si toos ah halkan kaydin karaa. Haddii aad rabto in aad beddesho jid galka, waqtigan, waxaad u baahan tahay riix "..." badhanka si ay u gacanta u dhigay. Ama toos raaci tallaabadii u dambaysay.
3 Start AVI in MPEG-2 diinta
Si fudud wax miiran "Beddelaan" rukun ee hoose ee midigta ah app this 's interface ugu muhiimsan si ay u bilaabaan diinta AVI in MPEG-2. Ka dib markii diinta, aad si toos ah guji kartaa "Folder Open" doorasho si aad u hesho files wax soo saarka. Ogeysiis in files gediyay waa la .mpg extention ah.
Talaabooyinka ee DVD gubanaya:
Haddii aad rabto in aad ku gubi DVD ah ka file AVI aad, aad u baahan tahay in ay ku dhufatey "Guba" tab ugu sareysa. Markaas, waxaad geli doonaa interface ee "Guba". Next, sameeyaan waxyaabaha soo socda:
Talaabada 1: isticmaal si la mid ah ku xusan in ay ku shuban files AVI aad.
Talaabada 2: Dooro mid ka mid ah DVD template menu in astaysto aad menu u gaar ah, iyo (optional) dari asalkaaga music jecel yihiin ama sawir.
Talaabada 3: saxaafadda "Guba" button rukun-xaq u hooseysa oo ka mid ah "Guba" interface ka.